Kaabashka sii kordhaya | January 2020
Waxaan u koraan kaabajka beerta our: shuruucda beerto iyo daryeelka
Sida loo koro kaabajka beerta guriga furan: karinta, beerashada iyo daryeelidda dhirta Cabbitaannada soodhaweyntu waa qurux badan oo ah noocyo badan oo qaran ah. Sababta ay ugu caansanaantani waxa ay ku jirtaa baaxadda ballaaran ee geedkaan, iyo sidoo kale sifooyinka wanaagsan ee ay leedahay.
All oo ku saabsan daryeelka ku habboon iyo broccoli beerto
Kaabashka broccoli ayaa muddo dheer la ogaaday sifooyinkiisa cuntada. Brokoli waxaa lagula talinayaa dadka qaba sonkorowga iyo dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha, iyo qiyaaso badan oo folic acid iyo fiber ay ka dhigaan wax aan lagama maarmaan u ah haweenka uurka leh. Sida ay u koraan geedo u gaar ah Ka hor inta laga beerto, wax ugu horeysa ee aad u baahan tahay si ay u go'aamiyaan doorashada ee kala duwan, ka dibna raacaya diyaarinta miraha broccoli.
Waa maxay kaabashka kaabiga ah ee faa'iido leh
Qaar badan oo ka mid ah dalxiiseyaashayada oo dibadda ku joogay (Yurub, Maraykanka, Kanada) waxay xusuusinayaan in kaabashka makhaayadaha maxalliga ah iyo hareeraha (saxamada kala duwan, saladhyada iyo keega) ay ka jilicsan yihiin, macaan badan oo dhadhan badan oo ka badan noo. Dhibcada halkan maahan xirfad of karisyada, laakiin xaqiiqda ah in ay doorbidaan kaabash Savoy halkan. Nasiib darro, kaabajka digo ma aha mid caan ah halkan, inkastoo faa'iidooyinkeeda ay aad u weyn tahay in ay u qalantaa magaca "boqoradda qudaarta".
Sida loo koro kale kaabajka beertaada ee abuurka
Kaabashka - furaha jirka caafimaadka leh. Oo maanta waxaad baran doontaa sida loo kobciyo kaabajka kale ee ka soo miraha, nooca cagaarka loo baahan yahay iyo sida loo ilaaliyo guriga. Waa maxay kale kaabajka iyo sida ay waxtar u tahay Kaabashka Caleenta - nooc ka mid ah kaabajka, nooca beerta, wuxuu leeyahay hantida faa'iido leh. Inta badan waxaa loo yaqaanaa grunkol ama braunkol.
Sida loo koro geedo kaabajka
Kaabashka cad waa qayb muhiim ah oo nafaqada ku habboon oo dheellitiran ee qof walba. Khudraddani waxay ku guulaysatay mabaadii'da asaas ahaan iyada oo ay sabab u tahay xaqiiqda ah inay ka kooban tahay waxyaabo badan oo faa'iido leh iyo fitamiino (A, B1, B2, C). Sidaa darteed, ma aha la yaab leh in kaabajka waa marti joogto ah on sariiro dadka deggan xagaaga.
Kaabashka kaabajka shiineeyska ah ee China: Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelka
Kaabashka kaabajka ah ee chicken Chinese waa mid ka mid ah noocyada kaabajka ugu caansan ee Bariga Aasiya. Sababta oo ah biqilka aad u fiican, aan qabyo ahayn ee ciidda iyo guryaha nafaqada sare, bannaanka u badan ee our dalkeena bilaabay beerashada mass ee noocyada this kaabajka. Waxaan ka hadli doonaa qarsoonaanta beeritaanka habboon iyo daryeelka dukumiintiga maqaarka.
Kaabashka, Kaabashka kale, Kaabashka Ruushka ah, Jarmal, Dutch, Brauncol (Brunkol ama Grünkol) - kuwaas oo dhan waa noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'naadir', oo aan si wanaagsan loo garanayn, laakiin aad u faa'iido leh, nafaqo leh oo si sahlan loo cuno kaabash kaas oo aan sidoo kale u baahnayn daryeel gaar ah, si fudud u dulqaadanayo dhaxan iyo xitaa u koraan sida a perennial.
Sida loo koro broccoli berrinka bannaan
Dhulkeena, barokooliyuhu wuxuu bilaabay in la beero oo aanu cunin waqti dheer ka hor. Si kastaba ha ahaatee, khudraddan ayaa si degdeg ah u qaada caan, taas oo ku taala faa'iidada, dhadhanka iyo content-calorie. Si faa'iidooyinkeeda, waxaad ku dari kartaa xitaa macquulnimada daryeelka. Aynu ogaanno sida loo koro broccoli beerta.
Miyuu suurtagal ah in la koro kaabajka aan la soo qaadin iyo maxaa loogu talagalay?
Gobollada waqooyi, beerashada kaabajka si deg deg ah dhulka u furan waa mid khatar ah, sida suurtogalka ah ee dhaxan weli. Sababtan awgeed, kaabajka waxaa lagu koray habka seedling oo ku lug leh qaadashada. Maanta waxaan ku ogaan doonaa sida loo kobciyo kaabajka guriga, waxa ay na siin doonto iyo kiisaska aan loo baahnayn.
Ma u baahanahay inaan soo qaado caleemaha kaabajka?
Kaabashka waa khudrado caan ah oo ay ku koraan dhammaan deggenayaasha xagaaga. Maqaalkeena waxaan tixgelin doonaa mid ka mid ah su'aalaha dhibaatooyinka badan ee beeraleyda qudaarta: Ma lagama maarmaan in la soo saaro caleemaha hoose ee kaabajka? Maxay beerta beerta bilaabi Karaakadu waxay tiri - mid ka mid ah dalagyada dhibaatada koray beerta, sababtoo ah inta badan dhimashada geedo waxay ku dhacdaa dhulka sababtoo ah la'aanta qoyaan iyo nafaqo.
Xeerarka waraabka ee kaabajka ee dhulka furan
Ku dhowaad dhammaan bannaanka u koraan kaabajka beerta. Si kastaba ha ahaatee, khudraddaas waxay u baahan tahay daryeel gaar ah, gaar ahaan marka ay timaado waraabinta. In our article waxaan ku tilmaami doonaa sida loo cabbo kaabajka ka dib markii laga beerto dhulka si aad u hesho goosashada oo hodan ah iyo dhadhan fiican leh. Xaaladaha kobcin sii kordhaya Kaabashada kobcin waa shaqo adag.
Xeerarka aasaasiga ah iyo hababka waraabinta ee kaabajka ah ee dhulka furan
Kaabashka waa mid ka mid ah dalagyada khudradda ugu muhiimsan. Waxaa lagu beeray ku dhawaad ​​dhammaan dalalka adduunka oo dhan ujeedada isticmaalka, iyo sidoo kale dhir daawo iyo ornamental ah. Xaqiiqada ah in aan beerta khudradda ka samaysan karin iyada oo aan kaabajarin waxay soo jeedinaysaa in daryeellidda aysan ahayn mid aad u adag. Si kastaba ha noqotee, waxsoosaar dheeraad ah ayaa la heli karaa oo keliya iyada oo la sameynayo abaabulidda waraabinta habboon iyo bacarimis.
Noocyada hadiyadaha kaabajka: sharax, sawir, beerid, daryeel
Kaabashka waa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan. Qaar badan oo kala duwan ayaa loo yaqaan, maanta waxaan ka hadli doonaa noocyada kala duwan Podarok, oo muddo dheer loo yaqaan gobolka. Tilmaanta iyo astaamaha Qaadku waa nooc dhexdhexaad ah oo kaabajka cad. Markii ugu horeysay ee noocyada kala duwan ee lagu sharxay diiwaanka 1961, ayaa loo oggol yahay beerista ganacsiga.
Sida loo daryeelo kaabajka ka dib markii laga beerto dhul furan
Bannaanka u badan, bannaanka u fiiro gaar ah u beerashada khudaarta, laakiin ma yaqaanno sida si habboon u daryeelaan kaabajka dhulka ee furan. In this article waxaan ka hadli doonaa aasaasiga ah ee daryeelka this khudradda faa'iido, iyo sidoo kale ku siin talooyin ku saabsan bacarimiso ciidda for warshadda. Waxaan bixinaa waraabinta saxda ah Barta ugu muhiimsan ee daryeelka khudradda waa waraabinta.
Ammaanta kaabash: sifo ah ee kala duwan, la beero iyo daryeelka
Maanta, kaabajka koraa on kasta dadka degan dacha Ruush. Waxyaabahani waa mid caan ku ah qaab kasta: caanaha, la shiilay, lakulmay, la gooyey, lakabyo, lafaha iyo khudradda cagaaran. Oo layaabna ma leh, maxaa yeelay, khudradda this leedahay wax badan oo ka mid ah walxaha waxtar leh. Waxaa la arkaa in ay kala duwan ugu badan ee kaabajka, loo yaqaan "ka nasahan", sharaxaad ku saabsan beerto iyo daryeelka berrin bannaan, waayo, taas oo aan ku soo bandhigi in this article.
Kaabashka "Dzhetodor": sifooyinka, beerashada agrotechnology
Dhammaan dalagyada hadda jira, khudaarta waxay ku nool yihiin meesha ugu muhiimsan nafaqada dadka. Waxay cunaan cuntooyin cayriin ah, oo lagu daray cunto diyaar ah, waxayna gooyeen saladhka. Khudaarta waxaa loo qaybiyaa tuber iyo xididada, qaraha, miro, yaanyo. Dhaqanka kaabajka, oo ka tirsan qoyska Kabbashka, ayaa lagu kala saaraa koox hoosaad kala duwan.